Ny lalao stickman 6 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Aaron Rivas | 19/07/2021 10:15 | Fampiharana Android, Fitaovana Android
Ny stickmen, fantatra ihany koa amin'ny hoe stick stick, dia iray amin'ireo olona mahatsikaiky indrindra amin'ny lalao Android. Noho io antony io indrindra no ahitantsika azy ireo ho mpiorina amin'ny lohateny maro ao amin'ny Google Play Store, ary ankehitriny nanangona ny sasany izahay mba hahafahanao mahazo ny mahafinaritra indrindra.
Manolotra lisitray an'i Lalao 6 Stickman ambony ho an'ny Android izay ho hitanao izao. Maimaimpoana daholo ary, mazava ho azy, iray amin'ireo alaina indrindra ao amin'ny magazay, satria izy io koa dia iray amin'ireo mahafinaritra indrindra amin'ny katalaogna.
Etsy ambany no hahitanao andian-lalao 6 stickman tsara indrindra ho an'ny finday Android. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra.
Na izany aza, iray na maromaro dia mety hanolotra rafitra fandoavam-bola bitika anatiny, izay ahafahan'ny fidirana amin'ny atiny bebe kokoa ao anatiny, ary koa ny fahazoana misimisy kokoa hilalao amin'ny ambaratonga, zavatra marobe, loka ary valisoa, ankoatry ny zavatra hafa. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Eny eny, andao isika hanatona azy.
1 Stickman mahery duelista
2 Stickman Party: 1 2 3 4 Lalao maimaim-poana
3 Stickman Shinobi: Ady Ninja
4 Fanesorana Stickman
6 Infinity Stickfight
Stickman mahery duelista
Ny lalao stickman, amin'ny ankapobeny, dia miavaka amin'ny hoe tsotra indrindra. Na izany aza, tsy fanakantsakanana ho azy ireo izany mba ho iray amin'ireo mahafinaritra sy voalohany indrindra amin'ny fotoana iray.
Stickman Supreme Duelist dia iray amin'ny lohateny tsotra indrindra amin'ny haavon'ny sary, nefa koa misy ady azo tanterahina noho ny sarimiaina vita tsara izay mamaly ny fizika ary manome traikefa tena tsara amin'ny lalao. Ary amin'ity lalao ity dia tsy maintsy miatrika ny mpanohitra anao ianao, izay mihamitombo tsikelikely ny fahasarotana ary isaky ny tranga vaovao mitranga aorian'ny fandresena ny ambaratonga tsirairay amin'ny lalao.
Misy ihany koa ny maody mpilalao telo, izay mpitovo, roa (miaraka amina namana) ary fomba tafavoaka velona. Safidio ilay tianao indrindra ary manomboa miady amin'ireo mpanohitra anao ho tonga mpiady stickman matanjaka indrindra amin'ny rehetra.
Developer: Rahalahin'i Neron
Stickman Party: 1 2 3 4 Lalao maimaim-poana
Stickman Party dia lalao tsara iray hafa ho an'ny Android, miaraka amin'ny fahafaha-milalao irery na miaraka amin'ny mpilalao 4. Ny tsara indrindra dia tsy mila fifandraisana Internet na Wi-Fi izy satria azo lalaovina amin'ny finday mitovy aminao sy ireo mpilalao telo hafa tadiavinao izy io, satria misy tokonam-pifaliana ho an'ny tsirairay.
Ity lalao ity dia mahafinaritra kokoa raha milalao miaraka amin'ny namanao ianao, fa amin'ny maody tsirairay dia mbola afaka mihantona amin'ny fomba mampiala voly ianao, raha mampihatra ny fahaizanao sy mampiofana ary avy eo milalao miaraka amin'ny namanao. Ary misy ny hafa amin'ity lalao ity ary misy lalao stickman soccer, mandoko ny loko, mamoaka ny baolina, fifandonana stickman, hazakaza-be fiara fitateram-bahoaka, fiara mifono vy sy maro hafa. Misy lalao kely 30 eo ho eo izay tsy maintsy mahafinaritra an'ny Stickman Party ary mihabetsaka ny hafa ampiana.
Io dia, tsy isalasalana, iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny karazany, zavatra iray izay efa nanangona fampidinana maherin'ny 10 tapitrisa, fanehoan-kevitra miabo 1 tapitrisa mahery indrindra ary fanamarihana kintana 4.4 hajaina ao amin'ny Google Play Store. Ho an'ny Android finday.
Developer: Playmax Lalao Studio
Stickman Shinobi: Ady Ninja
Raha mpankafy anime ianao ary, indrindra kokoa, Naruto sy Naruto Shippuden, ity lalao stickman ity dia ho anao. Ny tarehin-tsoratra izay ho hitanao amin'ity iray ity dia sasany amin'ireo mampalaza an'i Naruto, ka i Sasuke, toa an'i Madara Uchija, Tobi (Obito), Itachi sy ny maro hafa, dia miseho amin'ny lalao, izay samy manana teknika mahavariana sy mahatoky amin'ny andiany Japoney.
Ny tsirairay amin'ireo stickmans dia afaka mampiasa hery sy fahaiza-manao mifanaraka amin'ny zavatra hitantsika amin'ny anime. Ohatra, Madara dia afaka mampiasa ny Susanoo mba hialana amin'ny fanafihan'ny fahavalo, raha Itachi, Sasuke, ary Obito kosa dia afaka mampiasa ny Sharingan ary mampiasa herin'ny maso. Naruto kosa dia afaka mampiasa ilay amboahaolo sivy-sivy, amin'ny fotoana itondran'i Gaara fasika eo anilany. Sakura sy Kakashi koa dia tsy hita miharihary amin'ny tsy fahatongavan'izy ireo amin'ity lalao stickman malaza ho an'ny finday Android ity.
Izy io dia manana seho an-tsarimihetsika, voalamina tsara ho an'ny ady rehetra, miaraka amin'ny sary sy sary mihetsika mampihetsi-po, ary feon-kira izay manitrika anao amin'ny hetsika. Ao amin'ny fanontaniana, misy sarintany 10, ambaratonga 300 manomboka amin'ny mora ka hatramin'ny sarotra ary sefo 30 eo ho eo no tsy maintsy resinao hanaporofoana fa ianao no mpiady ninja tsara indrindra amin'ny rehetra. Mazava ho azy, mba hanomezana tolona tsara azy ireo, dia afaka mahazo fanatsarana ianao izay hampitombo ny tanjaky ny toetranao, handresena izay olona mankahala ninja anao.
Amin'ny voalohany dia manana fonosana mpilalao manomboka ianao, izay misy ny mpiady lehibe sasany an'i Naruto. Avy eo ianao dia afaka mahazo bebe kokoa ny hafa ary manokatra valisoa vaovao isaky ny haavo ambaratonga.
Stickman Dismounting dia lalao iray hafa tena tsara tokony hifaneraserana amin'ny fotoana rehetra, na dia tsy manana fifandraisana Internet sy Wi-Fi aza ianao. Na dia mampiseho sary tsotra sy sary mihetsika aza izy dia manana rafitra fizika izay mahatonga ny fihetsiketsehana sy ny fihetsiky ny zavatra tena misy.
Mazava ho azy, toy ny amin'ny lalao multilevel lehibe hafa, ity Izy io dia miaraka amin'ny tontolo samihafa izay misy zavatra mihasarotra tsikelikely amin'ny ambaratonga tsirairay. Tamin'ny voalohany dia toa tsotra ny zava-drehetra, saingy tsapanao avy eo fa tsy dia mora loatra izany ary ny ambaratonga taty aoriana dia mitaky faharanitan-tsaina sy fahaizana hamaha olana.
Etsy ankilany, ity lohateny stickman ity mamela anao hanamboatra ambaratonga amin'ny kojakoja samihafa ary koa mirehareha amin'ny rafitra famerenana miverina miaraka amin'ny fahaiza-mitahiry sy mifanakalo. Ilaina ny fanandramana; ny lazan'ny kintana 4.3 mifototra amin'ny fisintomana mihoatra ny 10 tapitrisa ary fanehoan-kevitra miabo 400 mahery manondro izany.
Raha mpankafy baolina kitra ianao ary tianao ny hilalao ity fanatanjahantena ity, Stickman Soccer 2014 dia iray amin'ireo lalao tsara indrindra azonao atao dieny izao ao amin'ny Google Play Store. Ity lohateny ity dia manolotra sary namboarina tsara sy lalao milamina sy manintona izay hahasarika ny olona rehetra. Ankoatr'izay, ny toetrany no mampihomehy indrindra ary ny fihetsik'izy ireo sy ny fizika dia tena tsara, toy ny feon-kira.
Ny fanaraha-maso tsotra amin'ity lalao ity dia manamora ny fitarihana mpilalao handresy ny fahavalo. Misy ekipa mihoatra ny 40 manerantany, izy rehetra miaraka amin'ireo firenena malaza indrindra izay manatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA. Safidio ilay tianao indrindra na misolo tena anao ary manomboka vanim-potoana feno baolina kitra sy hetsika.
Azonao atao ny misafidy sy milalao kaopy marobe, ny be mpijery indrindra ary miaraka amina toerana falifaly mpankafy indrindra, toy ny amboaran'i Amerika, ny fiadiana ny amboara eropeana, ny amboara eran-tany, ary maro hafa izay tsy maintsy resinao Misy ihany koa ny maody lalao maro izay azonao isafidianana, toy ireo ao Shootout sazy (sazy), Soccer Soccer ary Street Soccer (soccer soccer), ankoatry ny hafa. Mazava ho azy, ity lalao ity dia maka tahaka ny tena izy, miaraka amin'ny mekanika maloto, sazy, fandefasana lava na voasivana, sary mihetsika mpandresy ary maro hafa.
Ny fiasa hafa an'ny Stickman Soccer 2014 dia misy lalao roa an'ny 11 vs 11 sy 4 vs 4. Misy ihany koa ny kianja filalaovam-baolina marobe izay mitazona ny fahafinaretana tsy ho somary monotone mandritra ny ora maro. Mandritra izany fotoana izany dia misy rafitra laharana manerantany izay ahafahanao mandrefy ny valiny amin'ireo mpilalao hafa manerantany ary manatsara ny fahatongavana ho laharana voalohany. Ho an'ny ambiny, ny taham-pahavitrihana izay mifanaraka amin'ity lalao ity dia 60 FPS (zana-kazo 60 isan-tsegondra), noho izany dia ampy tsara ny fihenan'ny sary mihetsika.
Mba hamaranana ity lahatsoratra fanangonana ny lalao stickman tsara indrindra ho an'ny Android ity dia manana isika stickman tena tsara sy lalao ady, izay ny Stickfight Infinity, iray izay miankina amina dinika tena mahaliana iray, miaraka amina endri-tsoratra miloko mifanatrika mba hanehoana hoe iza no tsara indrindra ary nahoana. Ampiasao ny anao ary ento any amin'ny fandresena isak'izay, miaraka amin'ny fahaiza-manao izay hahatonga ny mankaleo ho zavatra taloha sy zavatra tsy mampiavaka an'ity lohateny finday Android malaza ity.
Lalao Stickfigth Infinity miaraka amin'i fomba fampielezan-kevitra misy ambaratonga tsy mifarana ary sarotra kokoa isaky ny mandeha. Izy io koa dia manana fitaovam-piadiana marobe izay azonao ampiasaina handresena ireo mpanohitra amin'ny sehatra ady isan-karazany izay tokony ho hitanao sy hanovanao be dia be. Hitsambikina, mihetsika, mitifitra ary manafika izay rehetra manandrana manala anao eo amin'izao tontolo izao hahazoana ny voninahitra. Aza avela hisy stickman hafa handresy sy hanala baraka anao. Ianao irery ihany no afaka manome satroboninahitra ny tenanao ho mahery indrindra rehetra, amin'ny tontolo tsy misy famindram-po sy famelan-keloka.
Misy mihoatra ny 10 tapitrisa ny fisintomana izay reharehan'ny anaram-boninahitra ity, izay manana laza tsara manodidina ny 4.2 kintana ao amin'ny Play Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny lalao stickman 6 tsara indrindra ho an'ny Android